Delete music ka iPod in Dufcaddii
> Resource > iPod > Sida loo Delete Music ka iPod in Dufcaddii
Takhalusid music ka iPod in Dufcaddii waa mid aad u culus marka aad leedahay heeso aad u badan oo aan la rabin aad iPod, kuwaas oo aad looga hortago ka soo degida files aad ugu jeceshahay. Haddii aad go'aansato in aad isticmaasho Lugood in ay ka saarto heeso iyadoo la tirtirayo fayl music on your computer ka dibna syncing music aad iPod, waxaa laga yaabaa in aad lumiso heeso aad ugu jeceshahay. Haddii aad doorato in aad gacanta u maamuli lahayd iPod in Lugood, waxaad tirtiri kartaa heeso ama playlists mid mid. Maxaa dhacaya haddii aad qabto tan oo songs in aad rabto in aad tirtirto? Ma waxaad weli midba midka kale ka dib markii meesha laga saaro songs?
Just siin fikradda ah oo ku saabsan sida loo tirtiri music ka iPod la Lugood hadda. Halkan waa iPod qalab music saarista awood badan oo si sahlan loo isticmaalo. Waa Wondershare TunesGo (Windows) ama Wonershare TunesGo (Mac) . Sidaa daraadeed, marna ma u baahan tahay in aad u hagaagsan iPod la Lugood, mana aad waqti badan in mid mid la tirtiro heesaha. Halkii, waxa aad awoodi kartaa in aad ka saarto aad heeso aan la rabin in Dufcaddii.
Hoos waxaa ku tutorial ah oo faahfaahsan. Sidaa darteed haddii aad rabto in aad ogaato sida ay u soo saarto heeso ka iPod taabto, download barnaamijkan oo ku xidh aad kombuutarka.
Fiiro gaar ah: The version Windows taageertaa iPod xiriiri 5/4/3. Waayo, Mac users version, waxaad qaadi karaan tallaabooyinka ka mid ah in ay ka saarto heeso ka iPod xiriiri 5/4.
Sidee in ay tirtirto heeso ka iPod taabashada
Tallaabada 1. Connect iPod xiriir PC iyo ordi barnaamijkan
First of dhan, xiriiriyaan iPod xiriiri PC via cable USB ah. Markaas ordi this iPod qalab music saarista. Markii barnaamijkan ogaadaa aad iPod taabto, waxaa soo bandhigaan doonaa iPod xiriiri on suuqa kala guriga.
Fiiro gaar ah: Ku rakib Lugood aad kombuutarka. Ama waxaad kala socon kartaa suuqa kala rakibo Lugood si ay u rakibi marka aad abuurtaan TunesGo.
Tallaabada 2. music Delete ka iPod taabashada
Yahay in la qabto, waa in aad guji "Media" oo ku yaalla guddi bidix. Markaas, furmo warbaahinta, guji "Music" inay soo qaadaan suuqa kala maamulka music ah.
Dooro songs aan la rabin. Haddii aad rabto in aad tirtirto heesaha oo dhan, kaliya aad u baahan tahay in aad doorato mid ka mid song ka dibna hoos u hay "Ctrl + A". Markaas, guji "Delete". Marka uu furmo suuqa yar ayaa u muuqda xusuusin "Ma hubtaa in aad rabto in aad tirtirto music ee la doortay ee iPod?" waa in aad ku dhufo "Haa". Markaas iPod qalab music saarista bilaabo inuu tirtirto music.
Haddii aad rabto in aad si toos ah uga saarto playlists badan oo aadan ka tirsan playlists smart aad iPod, guji "playlist" ee buugga geed ka tagay si uu u furo suuqa kala playlist ah. Sidoo kale, waxay dooran playlists aad rabto in aad ka saarto oo guji "Delete".
Fiiro gaar ah: Waqtiga xaadirka ah, laguuma ogola in ay tirtirto playlists smart.
Waa hagaag, taasi oo dhan oo ku saabsan songs tirka ka iPod taabto. waa wax sahlan, soo maaha? Ka sokow la tirtiro music, waxaad samayn kartaa tirtirto badan videos on your iPod sidoo.